Bezzia သည် AB Internet group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာသည်ယနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရည်စူးပြီး၊ Bezzia ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်၊ အလှအပ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သားဖွားခြင်းတို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အယ်ဒီတာများသည်စိတ်ပညာ၊ သင်ကြားရေး၊ ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစသည့်နယ်ပယ်များတွင်အထူးပြုကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဌာနခွဲများရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောရည်မှန်းချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိကြသည်။ Bezzia အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်စာဖတ်သူများပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်သည်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်၍ တိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။
El Bezzia အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ၎င်းကိုအောက်ပါအယ်ဒီတာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Bezzia အရေးအသားအဖွဲ့သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးပရိသတ်များအတွက်ရည်ရွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါ ၀ င်လိုပါက၊ ဒီပုံစံကိုဖြည့်ပါ.
စာရေးသူ၊ ဘာသာပြန်၊ ဘလော့ဂါနှင့်မိခင်။ ငါဟာအနုပညာ၊ ဖက်ရှင်၊ ဂီတနဲ့စာပေတွေကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ ကဘာစီလိုနာမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ သဘာဝအားဖြင့်စပ်စုခြင်းနှင့်အတော်လေးမဆင်မခြင်, ဘဝကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းဘာမှလက်လွတ်ဖို့မအမြဲသတိထား!
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကဆရာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗေဒဘွဲ့ကိုရထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖက်ရှင်၊ အလှအပသို့မဟုတ်လက်ရှိအရေးကိစ္စများအတွက်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုရော့ခ်ဂီတအနည်းငယ်ထည့်သွင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၌မီနူးအပြည့်ရှိသည်။
နှစ် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာလောကကိုအာရုံစိုက်လေ့လာနေတဲ့ငါ့ရဲ့အချိန်တွေဟာအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။ ငါသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းဂီတလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်; ဒုတိယကတော့ချက်ပြုတ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အမေ၏သရုပ်ဆောင်အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အတွက် Actualidad Blog မှယခုသင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ကြောင်းမှတ်မိသည်။ ငါ Bilbao ကနေလုပ်ပေး; ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်ကျောပိုးအိတ်သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာအားလုံးကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းဒီမှာအမြဲနေခဲ့တယ်။
မိခင်၊ အထူးပညာရေးဆရာ၊ စိတ်ပညာနှင့်စာအရေးအသားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိုအသည်းအသန်။ အလှဆင်ခြင်းနှင့်အရသာကောင်းသောသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းသင်ယူနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဝါသနာများကိုကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်စေသည်။ မင်းငါ့ဆီလည်ပတ်လို့ရတယ် ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အရာအားလုံးသတိထားပါရန်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါ၊ ကျန်းမာတဲ့ဘဝရဲ့သော့ချက်ဟာမျှတမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်ဘဝပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့ရသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဘဝ၏အယူအဆ၊ လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်လေ့လာသင်ယူခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အသားအရေတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ကျွန်ုပ်အားနေ့စဉ်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်များ၊ ဖက်ရှင်များနှင့်အလှအပများသည်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါ ၀ င်နေခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ အရေးအသားသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အချို့သောနှစ်များအတွက်, ငါ့အလုပ်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်ဝသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင်၏ဟန်ချက်ကိုရှာရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ကြော်ငြာဘွဲ့နဲ့အတူငါအများဆုံးကြိုက်တာကအရေးအသားပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်အလှဆင်ခြင်း၊ လှပခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အရာအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလှဆင်ခြင်း၊ ဖက်ရှင်နှင့်အလှကုန်လှည့်စားခြင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ ငါသူတို့ကိုအခြားလူများကအသုံးဝင်စေရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
စိတ်ပညာကျောင်းသား, ပညာရေးမော်နီတာနှင့်မျိုးစုံဝါသနာနှင့်အတူ။ ကျွန်မရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာတစ်ခုကတော့စာရေးခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းနှင့်အလှအပ၊ မိတ်ကပ်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ အလှကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသိတဲ့အရာတွေကိုမင်းနဲ့မျှဝေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မင်းလည်းမင်းရဲ့မှတ်ချက်များနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာဖို့ငါ့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ Bezzia ကိုဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်များနှင့်အင်တာနက်နှင့်ဖက်ရှင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူ။ ငါအမျိုးသမီးအလှတရားအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုက်တယ်။ သငျသညျတောက်ပလိုလျှင်, တွန့်ဆုတ်ခြင်းနှင့်ငါ့နောက်သို့မလိုက်ကြဘူး!
ဘလော့ဂါ၊ ဒီဇိုင်နာ၊ အသိုင်းအဝိုင်းမန်နေဂျာ ... မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးကျွန်တော့်ကို ဦး ဆောင်နေသောအကျိုးစီးပွားများစွာနှင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖက်ရှင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့်လက်ရှိဖြစ်ရပ်များ၊ လေးဘက်စလုံးကဂလီစီယန်၊ ငါတတ်နိုင်သမျှရွှေ့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ငါပန်ဒက်ဗ်ဒရာမှာနေတယ်။ ငါနေ့တိုင်းဆက်လက်လေ့လာသင်ယူသည်, ဤအသစ်သောဇာတ်စင်ရုံအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါစိတ်ပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာပါ။ အသိပညာကိုအနုပညာနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာကိုရောနှောလိုသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလည်းခံစားချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင့်ကိုလှပပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်အကြံဥာဏ်များစွာကိုငါပေးမယ်။
ကျွန်တော့်ကိုကြီးပြင်းလေ့လာပြီး Malaga မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါ Valencia မှာနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူ၍ ကျန်းမာသောချက်ပြုတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားအခြားအရာများအားအပ်နှံရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာမကောင်းတဲ့အစာကကျွန်တော့်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့မီးဖိုချောင်ကိုစိတ်ဝင်စားစေတယ်။ ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်“ Monster of Recipes” တွင်စတင်ရေးသားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။ Actualidad Blog မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဘလော့ဂ်များတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုဆက်လက်မျှဝေရန်အခွင့်အလမ်းရပြီဖြစ်သည်။
ဟယ်လို! ငါ Marta, လူမှုဗေဒပညာရှင်နှင့်ကလေးများနှင့်ပတ်သက်။ အသည်းအသန်။ အိမ်ထဲမှကလေးငယ်များနှစ်သက်သောကစားစရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုရိုက်သည်။ သူတို့အတွက်ဖျော်ဖြေမှုများအပြင်သူတို့သည်သူတို့၏ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သူတို့ကိုကူညီခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်သောနည်းလမ်းဖြင့်မိသားစုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မည့်ဗဟုသုတများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Geek မိန်းကလေးစီးရီး, စာအုပ်များနှင့်ကြောင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်။ လက်ဖက်ရည်စွဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖက်ရှင်ကိုနှစ်သက်သောစပိန်ဘာသာဝင်ပိုလန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်သစ်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ rarities များကကျွန်ုပ်တို့ကိုထူးခြားစေပြီး၎င်းတို့မှအကျိုးကျေးဇူးများယူရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
Carmen Espigares placeholder ပုံရိပ်
စိတ်ပညာရှင်, HR အထူးကုနှင့်ရပ်ရွာမန်နေဂျာ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၏Granaínaနှင့်အောင်မြင်ရန်ပန်းတိုင်များကိုရှာဖွေသူ။ ငါ့ဝါသနာအချို့? ရေချိုးခန်းထဲမှာသီဆိုပါ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတွေးအခေါ်ယူပြီးနေရာအသစ်များကိုကြည့်ပါ။ အပြိုင်အဆိုင်စာဖတ်သူတစ်ယောက်သည်သူမမျက်နှာပေါ်တွင်အပြုံးဖြင့်အပြုံးဖြင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုရင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားခြင်း၊ စာရေးခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုများဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသက်တာ၌အလုပ်သင်၌ ... ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသမျှအားလုံးကိုမဖြည့်ပါက၎င်းတို့အားအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်မှုပညာ, လက်မှုပညာ, ဖန်တီးမှုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း, မူရင်းလက်ဆောင်များ, အလှဆင်, အခမ်းအနားများ ... အားလုံးလက်စွဲ။